Ukuzimisela kuzuzele uBhele u-R600 000 | Isolezwe
Ukuzimisela kuzuzele uBhele u-R600 000
Isolezwe / 28 May 2012, 11:09am /
UMGADLI weMoroka Swallows uSiyabonga Nomvete ubuthe imiklomelo emcimbini wePremier Soccer League wokuklomelisa abadlali obuseLyric Theatre eGoli izolo ebusuku. Lapha wathathwa ejabulela elinye lamagoli akhe angu-20 awashaye ku-Absa Premiership kule sizini.	Isithombe: ETIENNE ROTHBART
UZOBHUKUDA emalini umgadli weMoroka Swallows, uSiyabonga “Bhele” Nomvete emva kokuhlabana kwakhe emcimbini wePremier Soccer League (PSL) wokuklonyeliswa kwabadlali obuseLyric Theatre eGoli izolo ebusuku.
Yize uNomvete ubelokhu ekugcizelele njalo ukuthi into engamjabulisa kakhulu wukuwina isicoco seligi kodwa ngeke awunqabe u-R600 000 azowuthola emva kokudla umhlanganiso emaqoqweni abeqokwe kuwona, okuhlanganisa nomklomelo weFootballer of the Year okhishwa wusihlalo wePSL.
Lesi sihlabani saKwaMashu siwine emkhakheni we-Absa Premiership Player of the season ohamba no-R150 000, Absa Premiership Players’ Player onesheke lika-R150 000, edlisela ogageni uSiyabonga Sangweni we-Orlando Pirates naye obeze kulo mcimbi ethwelwe ngeqoma emva kokushaya into ecokeme esizinini yakhe yokuqala neBucs.
UNomvete ube esegixabezwa ngo-R50 000 wokuba umshayimagoli ophambili njengoba evalele angu-20 emidlalweni yeligi.
Amagalelo kaNomvete, obese kuphele iminyaka emibili engekho eqenjini lesizwe, azwakele nakumqeqeshi weBafana Bafana, uPitso Mosimane, njengoba egcine ehlulekile wukumziba wambizela eqenjini lakhe elikhempe eRusternburg lapho lizicijela imidlalo yokuhlungela yeNdebe yoMhlaba.
Abamazi kangcono lo mdlali, oseke wadlalela i-Udinese kuSerie A phesheya kwezilwandle, bathi akumangazi ukumbona eshaya into ecokeme.
USibusiso “Rhee” Zuma weSuperSport United ongumngani wakhe usanda kutshela leli phephanda ukuthi iBhele liyindoda ezifelayo ngomsebenzi walo.
UZuma wathi abadlali abancane bangasika iphethini kuBhele njengoba ewazisa umsebenzi wakhe futhi ehlezi ezimisele.
Nomqeqeshi wakhe kuSwallows, uGordon Igesund, othathe umklomelo womqeqeshi ovelele, uke wakuncoma ukuzimisela kukaNomvete.
“Asikho isimanga asenzayo, uyazimisela ejimini futhi indlela awuhlonipha ngayo umsebenzi wakhe uba ngowokuqala ukufika ejimini, ahambe ekugcineni,” kusho u-Igesund.
Yize umgadli uNyasha Mushekwi ehluleke wancama wukutholela ezakhe amagoli kowamanqamu eNedbank Cup kodwa uhlomulile ngo-R100 000 wokushaya amagoli amaningi kulo mqhudelwano.
UMushekwi waqhululula amagoli ayisithupha beshaya iPowerline FC ngo 24-0 ku-Last 32, wengeze ngamanye amathathu kweminye imidlalo yeNedbank.
Unozinti weSundowns, uWayne Sandilands, ukhale wemuka nomklomelo weGoalkeeper of the Season wamshiya encela izithupha unozinti we-Orlando Pirates, uMoeneeb Josephs, omangaze abaningi elaxaza iqembu lesizwe ngesonto eledlule.
Isiyonke imiklomelo yamaPSL Awards
n Footballer of the Year: Siyabonga Nomvete (R250 000)
n Nedbank Cup Player of the Tournament: Nyasha Mushekwi (R100 000)
n Nebank Cup Young Player of the Tournament: Thabiso Nkoana (R25 000)
n Telkom Knockout Player of the Tournament: Benni McCarthy (R200 000)
n MTN8 Last Man Standing: Oupa Manyisa (R150 000)
n Absa Premiership Player of the Season: Siyabonga Nomvete (R150 000)
n Absa Premiership Players’ Player: Siyabonga Nomvete (R150 000)
n Absa Goalkeeper of the Season: Wayne Sandilands (R50 000)
n Absa Premiership Red Hot Young Player: Ronwen Williams (R50 000)
n Absa Premiership Coach of the Season: Gordon Igesund (R75 000)
n Absa-lutely Awesome Goal: Benni McCarthy (R50 000)
n Absa Premiership Top Goal Scorer: Siyabonga Nomvete (R20 000)
n NFD Top Goal Scorer: David Hadebe (R50 000)
n Referee of the Season: Victor Hlungwani (R50 000)
n Assistant Referee of the Season: Zakhele Siwela (R40 000)